Mareykanka oo sheegay in ay sii wadi doonaan howlgalada la dagaalanka argagixisada ee Soomaaliya - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaMareykanka oo sheegay in ay sii wadi doonaan howlgalada la dagaalanka argagixisada ee Soomaaliya
Mareykanka oo sheegay in ay sii wadi doonaan howlgalada la dagaalanka argagixisada ee Soomaaliya
June 9, 2018 Abdi Omar Bile Somalia 0
Maleeshiyada Al-Shabaab. [Sawirka]
Muqdisho-(Puntland Mirror) Ciidamada Mareykanka ayaa maanta oo Sabti ah sheegay in ay sii wadi doonaan howlgalada la dagaalanka argagixisada ee Soomaaliya.
“Iyada oo la kaashanayo Dowladda Federaalka Soomaaliya, ciidamada Mareykanku waxay sii wadi doonaan burburinta khatarta argagixisada ee Al-Qaacida iyo garabkooda Soomaaliya ee Al-Shabaab, iyo si la mid ah khatarta ISIS ee Soomaaliya.” Taliska Mareykanka ee Afrika ayaa sidaa ku sheegay bayaan.
“Waxaanu sii wadi doonaa la shaqeynta saaxiibadayada si loo taageero AMISOM iyo Dowladda Federaalka Soomaaliya dadaalka ay ku doonayaan in ay ku sameeyaan dowlad wanaag, horumar iyo xasilooni.” Ayaa lagu sii yiri bayaanka.
Ogeysiinta Mareykanka ayaa timid maalin kadib markii hal askari oo Mareykan ah la dilay afar kalena lagu dhaawacay weerar Al-Shabaab oo ka dhacay maamul goboleedka Jubbaland.
Intii lagu guda jiray sanadkan, Mareykanka ayaa ka geystay in ka badan 10 duqeymood gudaha Soomaaliya, duqentii ugu dambeysay ayaa ka dhacday meel qiyaastii 26 km dhanka koonfur-galbeed ka xigta magaalada Boosaaso asbuucii lasoo dhaafay, waxaana lagu dilay 27 dagaalyahan oo Al-Shabaab ah.
May 29, 2018 Hal askari oo katirsan ciidamada Puntland oo ku dhintay weerar ay ISIS ku qaaday saldhig ciidan oo kuyaala gobolka Bari
April 9, 2018 Mareykanka oo qaaday duqeyn labaad oo ka dhan ah kooxda ISIS ee ku sugan Puntland
May 19, 2018 Puntland oo beenisay waraaq lagu sheegay in Madaxweyne Cabdiweli uu u qoray Farmaajo
April 23, 2018 Taliyaha ciidanka Soomaaliya oo sheegay in ay xireen askar isku dayay in ay qalab ciidan kala baxaan xeradii uu Imaaraatka maamuli jiray
US says it will continue counterterrorism operations in Somalia
Mareykanka oo shaaciyay askarigii lagu dilay gudaha Soomaaliya
Baarlamaanka dowladda federaalka Soomaaliya oo meelmariyay xeerka shidaalka
Muqdisho-(Puntland Mirror) Baarlamaanka dowladda federaalka Soomaaliya ayaa maanta oo Isniin ah meelmariyay xeerka shidaalka. 150 xildhibaan ayaa meelmariyay sharciga, halka afar kale ay diideen, sida uu sheegay guddoomiyaha baarlamaanka Maxamed Mursal Shiikh. Sharciga ayaa horey [...]
Madaxweynaha Puntland oo Garoowe ku soo laabtay kadib safaro uu ku tagay Imaaraatka Carabta iyo Kenya
Garoowe-(Puntland Mirror) Madaxweynaha dowladda Puntland Siciid Cabdullaahi Deni ayaa maanta oo Sabti ah dib ugu soo laabtay magaalada Garoowe ee caasimada Puntland. Madaxweynaha ayaa asbuucyadii dhawaa ee lasoo dhaafay safaro ku tagay dalalka Imaaraatka Carabta [...]
Muqdisho-(Puntland Mirror) Wasaaradda Caafimaadka Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa sheegtay in coronavirus uu si aayar ah ugu faafayo bulshada dhexdeeda kadib markii maanta oo Jimce ah sagaal kiis oo cusub laga helay gudaha Muqdisho. Dadka xanuunka [...]